A na-erere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 40% osisi na ikike ikike isi obodo Lam Weston Belaya Dacha LLC - Nduku Magazine Magazine
Companylọ ọrụ Dutch "LVM CIES BV" Emecha nkwekọrịta iji nweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 40% nke osisi na ikike ikike nke Lipetsk french fries na-emeputa Lam Weston Belaya Dacha LLC, na-esote na Unified State Register of Legal Entities.
Emere mgbanwe ndekọ ahụ na December 18. Ugbu a ndị Dutch nwere osisi 74,9%, ihe fọdụrụ na 25,1% bụ Vladimir Tsyganov na-achịkwa, onye bụ onye otu ndị isi oche nke Belaya Dacha Group of Companies.
Na mbu, FAS kwadoro ntinye nke "LVM CIES B.V." na ịbawanye òkè na ikike ikike nke ụlọ ọrụ Lipetsk. Tupu mgbanwe kwekọrọ, ndị Dutch nwere 35,52%. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu bụ Belaya Dacha JSC (64,48%).
Companylọ ọrụ ahụ n’onwe ya kọwaara ụlọ ọrụ ozi azụmahịa Abireg na “ọrụ Lipetsk abụkwaghị ọrụ White Dacha.
Ekwesiri ighota na ebe obu na iwu ulo oru Lipetsk, Belaya Dacha na ulo oru Dutch nwere 75 na 25%. Agbanyeghị, na njedebe nke 2018 LVM CIES B.V. etinyere na FAS na arịrịọ iji mee ka mbak na isi obodo enyere ikike nke ụlọ ọrụ ahụ. Na 2019, ụlọ ọrụ Dutch malitere ịnweta 31,13% nke oke, na mgbe e mesịrị - 35,52%.
Tags: "Lam Weston Belaya Dacha"ndukuFrench fires emepụtara
Nzukọ Ezumezu nke United Nations kpọsara 2021 Afọ International nke Mkpụrụ na Akwụkwọ nri
Railzọ ụgbọ oloko Russia ga-ebelata ọnụahịa maka njem nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na 2021
Iwu na steeti na-achịkwa njikwa ọgwụ ahụhụ na agrochemicals ejiri